Global Voices teny Malagasy » Korea: Inona ny fantatrao ary tahaka ny ahoana ny ahafantaranao azy · Global Voices teny Malagasy » Print
Voadika ny 10 Aogositra 2018 7:44 GMT 1	 · Mpanoratra Hyejin Kim Nandika Naomy
Sokajy: Azia Atsinanana, Korea Atsimo, Hevitra, Mediam-bahoaka
(Lahatsoratra teny anglisy nivoaka tamin'ny aogositra 2008)
Nampiditra sary fanehoana ny bilaogera iray  ary miresaka ny dikan'ny fahalalàna sy ny fomba ahafahana manorina ambonin'ny fahalalàna.
Voafetra ny fotoana sy ny fahafaha-manao ho an'ny olombelona. Avy amin'izany dia tsy ho tanteraka mihitsy ny hahalala lalina ny zava-drehetra. Araka ny asehon'ny sary fanehoana, ny tsipika marindrano manondro ny halalin'ny fahalalanao ary ny tsipika mijadona maneho ny velaran'ny fahalalanao. Arakaraka ny andehanan'ny tsipika miankavanana ny halalin'ny fahalalàna ao aminao. Arakaraka ny haavon'ny tsipika ny habe(tsaha)n'ny fahalalànao. Ny zava-mahaliana izao dia hoe aiza ho aiza no misy ireo manana ny “Ph.D. degree” (diplaoma dôktôrà),” ny velaran'ny fahalalàn-dry zareo dia kely kokoa noho ny an'ireo mpianatra amin'ny sekoly ambany sy ireo manana ny diplaoma Master (Maîtrise). Azo atao ny mandika hoe ny sehatrasany ihany no hainy.
Tiako hazavaina amin'ny raikipohy iray ity sary fanehoana ity.
a (velarana) + b (halalina) = c
(Eto, a>0, b>0 ary isa tsy miova i c. Indraindray io mety ho isa miiba)
Miankina amin'ny olona, samihafa ny isa a, b, ary c. Raha mihalehibe ny velaran'ny fahalalàna, dia mihamanify ny halaliny. Saingy mila mahafantatra isika amin'ny mahazava-dehibe ny c. Raha lehibe kokoa ny tarehimariky ny c, dia mety ho lehibe kokoa ny velarana (habe) sy ny halalina. Raha mandinika sy mieritreritra momba ny tontolo bebe kokoa isika, dia mihavaventy ny fahafaha-manao.Tsy mandray fahalalàna amin'ny sehatra iray ihany isika, fa mihalehibe ihany koa ny fahafaha-manao azonao heverina. Hamoaka valiny avy amin'ny fotoana sy ny ezaka ny sandan'ny c. Raha miezaka ianao, hivelatra kokoa ny sanda. Mianatra sehatra iray ianao. Rehefa mahafehy azy ianao dia mety hahatakatra sehatra hafa any amin'ny farany. Fantatro fa azo tanterahana izany satria midika izany fa mihangeza ny sandan'ny c.
Tena manaiky tanteraka aho. Na dia miezaka aza aho ny hahalehibe kokoa ny c, dia tsapako fa ny a ihany no mihalehibe amin'izao fotoana izao.
Rehefa mahalala amin'ny ankapobeny ianao, dia mahalala amin'ny fomba matihanina ny sehatra misy anao. Mihevitra aho fa zava-dehibe izany. Rehefa mahalala amin'ny ankapobeny ianao, dia midika izany fa mahay sehatra misy anao amin'ny fomba fijery maro ianao.
URL to article: https://mg.globalvoices.org/2018/08/10/124447/
 bilaogera iray: http://link.allblog.net/13061825/http://extrad.egloos.com/1797529